Fursad laguugu tala galay adigaaga leh qorshe socda oo saldhigasho in aad shaqo ku tijaabisid, adigoo taageero dheeraad ah ka helaya gacanqabte jooga goobta shaqada.
Tababar shaqo oo leh gacanqabte wuxuu taageero kuu yahay adigaaga mar dhaw Swiidhan yimid, ee leh etableringsplan. Waxaad shaqabixiye ku ag tijaabin kartaa shaqo, waxaadna isla mar ahaantaas gacanqabte ka heli kartaa taageero dheeraad ah. Ulajeeddada laga leeyahay tababarka shaqo waa in aad fursad u heshid in aad tijaabisid xirfaddaada, in aad tijaabisid xirfad cusub ama in aad Swiidhan ka heshid khibrad nololeed oo suuqa shaqada ah. Waxaan tababarka shaqada la wadan kartaa waxyaabo kale, tusaale ahaan dhigashada luqadda swiidhishka ee ajaanibta (sfi).
Waxaad tababar shaqo qaadan kartaa ilaa iyo 6 bilood.
Tababar shaqo oo gacanqabte leh waxaa loogu tala galay adigaaga agteenna iska qoray wixii ka horreeyay 1 Jannaayo 2018, lehna etableringsplan. Taageerada waxaa loogu tala galay adigaaga aan lahayn ama ay kugu yartahay khibradda suuqa shaqada ee swiidhishku, una baahan tababar shaqo iyo gacanqabasho.
Nala soo xiriir haddii aad daneyneysid tababar shaqo. Si wadajir ah ayaan isula heleynaa goob shaqo oo kugu habboon.
Shaqabixiyaha ayaa kuu dooraya gacanqabte kugu taageeraya goobta shaqada.
Inta aadan billaabin tababarka shaqada heshiis ayaan adiga, shaqabixyaha iyo gacanqabtaha idinla gaareynaa. Halkaas waxaa lagu tilmaamayaa waxyaabo ay ka mid yihiin taageerada aad u baahantihid, hawlahaaga shaqada iyo waqtiyada shaqada iyo ilaa inta aad ka qeybqaadaneysid tababarka shaqada.
Inta aad ku jirtid etableringsersättning waad qaadaneysaa lacagtaada saldhigashada.
Lacagta etableringsersättningen waxaa ku jira ceymis badbaado ah. Badbaadadaas waxaad lahaaneysaa inta aad ku jirtid tababarka shaqada.
Ka qeyb qaadashada barnaamijka la qabsiga dalka